श्रीमानकै अगाडी बलात्कार गर्ने १२ वर्षपछि समातिए – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार ०९:४६
श्रीमानकै अगाडी बलात्कार गर्ने १२ वर्षपछि समातिए
पतिकै अगाडि पत्नीलाई बलात्कार गरेर फरार एक अभियुक्त बुधबार पक्राउ परेका छन्। घटनामा संलग्न हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका-११ इनरुवाका ५० वर्षीय हरिनारायण यादव १२ वषएपछि पक्राउ परेको डीएसपी तिलक भारतीले बताए। उनका अनुसार सोही ठाउँका दुधियावाला भनिने खटर यादवको खोजी भइरहेको छ।
सुनसरीको इनरुवामा मजदुरी गरेर दसैं मनाउन २०६४ असोज २९ गते राति हनुमाननगर हुँदै घर फर्किरहेका बेला यादवद्वयले दम्पतीमाथि आक्रमण गरेका थिए। दुवैजनाले पतिलाई नियन्त्रणमा लिएर पत्नीलाई बलात्कार गरेका थिए भने साथमा रहेको १० हजार रुपैयाँ लुटेका थिए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
भक्तपुरमा नक्कली स्यानिटाइजर बिक्री गर्ने पक्राउ !
मेडिकल सामग्रीमा कालाेबजारी, सीएनआईका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल पक्राउ !
उद्योगी घराना शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल कालो बजारीको आरोपमा पक्राउ, ६७ थान थर्मल गन बरामद !
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी – स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप !
PREVIOUS Previous post: बुहानबाट उद्धार गर्न स्वास्थ्यतर्फको तयारी पूरा
NEXT Next post: एक सातामै भारतबाट भित्रियो डेढ करोडको गुलाब